Nifampitana indray ny mpivarotra sy ny polisy kaominaly : daroka, vely kibay, toraka tetsy Soarano | NewsMada
Nifampitana indray ny mpivarotra sy ny polisy kaominaly : daroka, vely kibay, toraka tetsy Soarano
Efa mila ho isan’andro, saingy henjakenjana ny fifandonan’ireo mpivarotra amoron-dalana sy ny polisy kaominaly, tetsy Soarano, omaly.
Raikitra indray ny fifandonana teo amin’ny polisy kaominaly sy ny mpivarotra amoron-dalana omaly atoandro, tokony ho tamin’ny 1 ora sy sasany teo, teny Soarano. Vely kibay, toratoraka nitranga teny an-toerana, ka nahatrana olona roa. Voalaza fa mpivarotra amoron-dalana ireo, izay torana teo amin’ny arabe mihitsy vokatry ny daroka nahazo azy. Ny iray voavelin’ny kibay, ny faharoa azon’ny daka mandrivorivo.
Nisy ny fifandrangitana tamin’ireo mpivarotra rehefa tonga nanala azy ireo ny polisy kaominaly sy polisy nasionaly nandeha Mazda. Raikitra ny taim-bava avy amin’ireo mpivarotra, raha vao nidina ireo polisy nanala azy ireo. Ny mpitandro filaminana rahateo nasiaka satria efa isan’andro ny fangala-piery eny an-toerana. Efa ny maraina no nisy ny olana sy ny fifampitaritana teo amin’ireo mpivarotra amoron-dalana hanohitra ireo polisy kaominaly. Nitangorona isaky ny mandalo iretsy farany, ary tsy nety nanala ny entany, nisy ny fandraofana, ary raikitra ny savorovoro. “Avelao izahay hitady vola, hivarotra fa aza ampijaliana. Tsy hiala eto izahay”, hoy ny hikiaka ny mpivarotra.
Fifamaliana ary nitohy tamin’ny fihantsiana, kotaba, horakoraka izany ary niafara tamin’ny ady mihitsy. Marobe ireo mpivarotra amoron-dalana nitangorona teny an-toerana sy nitoratoraka fa rehefa naneho ny heriny ireo polisy monisipaly sy nasionaly resy tosika ihany ireo. Niverina tamin’ny laoniny rehefa niala teny an-toerana ireo polisy monisipaly. Nivarotra am-pilaminana ihany koa ireo mpivarotra amoron-dalana taorian’izay.
Tsy misy vahaolana
Sarotra ary sahirana tanteraka izay nitantana ny kaominina Antananarivo Renivohitra nifandimby teo nanala ireo mpivarotra amoron-dalana. Nanomboka tamin’ny krizy 2009 tena nampiroborobo azy ireo. Olona tsy an’asa, very asa avokoa ny ankamaroany. Ireo olona ireo izay tsy nanan-katao nandritra ny fitondrana tetezamita ka nivarotra avokoa, ary raikitra tanteraka eny Behoririka, Soarano, Analakely, sns.
Nitady vahaolana ny kaominina saingy niala maina. Ireo mpivarotra amoron-dalana tsy mety miala eny an-toerana. Mahatsiaro fampijaliana sy famoretana izy ireo amin’ny fanalan’ny polisy kaominaly azy. Tsy mahatsiaro intsony fa tsy manara-dalàna. Mbola ho sarotra ny raharaha, fety rahateo ny andro, mitombo ny mpivarotra, ny mpividy efa mifanaretsaka eny an-tsena. Inona ny vahaolana mahomby? “Avelao izahay hivarotra na fety fotsiny aza”, hoy ireo olona teny Soarano. Hiala tokoa ve anefa rehefa tapitra ny fety?